Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait
U Aye Khaing, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the State of Kuwait, presented his Credentials to His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait, on 27 January 2014, in Kuwait City.
Dated. 30 January 2014
ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးအေးခိုင်သည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့တွင် ကူဝိတ်မြို့၌ ကူဝိတ်နိုင်ငံအကြီးအကဲ ရှိတ်ဆာဘား အယ်လ်အာမက် အယ်လ်ဂျာဘား အယ်လ်ဆာဘား ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်